News - Sidee looga ilaaliyaa Eygaaga Coronavirus?
Dowladda Hong Kong waxay soo saartay Febraayo 28 in eey ku nool guriga bukaan COVID-19 uu leeyahay falcelin daciif ah oo daciif ah oo ku saabsan baaritaanka fayraska. Muuqaal kale oo dibedda ah oo ku yaal Maraykanka oo ah baadhitaan xayawaan ah oo laga helay fayraska sababa COVID-19 wuxuu ahaa shabeel qaba jirro neefsasho ah oo ku taal xero xayawaan oo ku taal Magaalada New York. Muunado laga helay shabeelkan ayaa la soo ururiyay oo la baaray ka dib markii libaaxyo dhowr ah iyo shabeellada xayawaanka lagu arko ay ka muuqdeen astaamo xanuun neefsashada ah. Kiisaska ayaa muujinaya in xayawaannada gaar ahaan eeyaha ay leeyihiin suurtagalnimada in lagu qaado fayraska cusub ee loo yaqaan 'coronavirus'.
Sidee eyda iska leh uga difaaci karaan eyga COVID-19?
Owners Milkiileyaasha caafimaadka qaba ee ku nool Mareykanka waa inay raacaan taxaddarrada aasaasiga ah ee nadaafadda sida inay gacmahooda ku dhaqaan saabuun iyo biyo kahor iyo kadib taabashada xayawaan kasta, oo ay ku jiraan eeyaha iyo bisaduhu.
Si looga caawiyo yareynta faafitaanka jeermisyada oo dhan, waa inaad si joogto ah u dhaqdaa timaha eygaaga.
Ku soo lifaaq dhaqeyaha xayawaanka wax tuubada beerta ah oo ku dar shaamboo eyga aad dooratay qalabka wax lagu shubo. Ha ka walwalin eeygaaga inuu ka baxsado dhaqida ama dhib badan. Chenille aad u nuugaya ayaa si dhakhso leh u qalajin karta timaha xayawaankaaga ama jidhkaaga. Shanlee / dhogor dhogorta, Ka tirtir dhaldhalaalka, guntimaha, dander iyo wasakhda ku xaniban. Sii xayawaanka si taxaddar leh u daryeel!
Ammaan ma leedahay in eeyga laygu salaaxo?
Dr. Jerry Klein, Madaxa Sarkaalka caafimaadka xoolaha ee AKC, wuxuu ku boorinayaa caqliga saliimka ah hab dhaqanka ugu wanaagsan marka laga hadlayo xayawaannadayada: waxay leeyihiin wasakh saxarada. ” CDC waxay bixisay tilmaamo ku saabsan isdhexgalka xayawaanka inta lagu jiro aafada:
Not Ha u oggolaan in xayawaanku gurguurta la falgalaan dadka ama xayawaanka kale ee ka baxsan guriga
C Bisadaha ku hayso gudaha markay suurtagal tahay si looga ilaaliyo inay la macaamilaan xayawaanka kale ama dadka kale
Ma socon karaa eeyga?
Dogs Ku raaco eeyaha xarkaha, adoo ka ilaalinaya ugu yaraan lix fiit dadka iyo duunyada kale
● Ka fogow jardiinooyinka eyda ama meelaha caamka ah ee dad iyo ey badani isugu yimaadaan
Ry Qaado wax kiciya cufan oo qashin-qub ah iyo qashin-qubka magac-bixiyaha xun haddii eeygaaga uu qabo fayraska. Ha qaadsiin eeyaha kale.
Eygaygu miyay tahay in laga baaro coronavirus?
Uma baahnid in eeygaaga laga baaro COVID-19. Sida laga soo xigtay Waaxda Beeraha ee Mareykanka, “xilligan, laguma talinayo in si joogto ah loo baaro xoolaha. Haddii xayawaannada kale la xaqiijiyo inay ku habboon yihiin SARS-CoV-2 ee Mareykanka, USDA ayaa soo dhejin doonta natiijooyinka. ” Tijaabooyin kasta oo lagu sameeyo xayawaanku ma yaraynayso helitaanka tijaabada dadka.
Haddii aad weli ka walwalsan tahay ama aad aragto isbeddel ku yimaada caafimaadka eeygaaga ama bisadda, la hadal dhakhtarkaaga xoolaha si uu isagu ama iyadu ay kuu la taliyaan.